Weriyihii Ajazeera ee lagu xiray Muqdisho oo faafiyay Sawirro uu soo qaaday Alshabaab +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weriyihii Ajazeera ee lagu xiray Muqdisho oo faafiyay Sawirro uu soo qaaday Alshabaab +SAWIRRO
Weriye Xamza Maxamed oo ka tirsan Aljazeera ayaa booqday xero tababar oo kooxda Alshabaab ku leedahay Bartamaha Somaaliya.
Weriyahan oo Soomaali-British ah, una shaqeeya Telefishanka Aljazeera, qeybta Englishka ayaa baahiyay sawirro gaar ah oo uu ka soo qaaday xero aan la sheegin meel ay ku taallo, sawirrada waxaa ka dhex muuqda ciidamo si xoog leh u hubeysan oo ka tirsan Alshabaab iyo madax sare oo uu ku jiro afhayeenka ururkaasi Sheekh Cali Dheere.
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay weriyahan oo laba maalmood kadib la sii daayay.
Telefishinada Aljazeera ayaa xiriir joogto ah la leh ururka Alshabaab, waxaana u suuragashay weriyahan inuu dhex maro Muqdisho oo Alshabaab xiriir la sameeyo kadibna u safro xarumaheeda isagoo sawirro iyo wareysiyo Video ah ka qaadaya.
Saxaafadda iyo weriyayaasha maxaliga ah ee ka howlgala gudaha Soomaalida ayaan loo ogoleyn inay wax xiriir ah la sameeyaan ama warbaahintooda ka baahiyaan, halka weriyeyaasha awoodda leh warbaahinta caanka ah u shaqeeya ay ka duwan yihiin sidaas.